Heart Museum: လိုချင်တာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါ.....
လိုချင်တာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါ.....
မိုက်လှချည့်လား သီချင်းလေးလဲကောင်းတယ်... စာသားလေးလဲကောင်း.. ဆိုတာလေးလဲကောင်း.. ကောင်လေးကလဲ ချစ်ဖို့ကောင်း... ဘူလေးလဲသိဘူး...
သီချင်းလေးကို ရင်ထဲ ထည့်ယူသွားပါတယ်
မဗေဒါရေ.... Declan Galbraith ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုထားတာပါ။ ထွက်တာတော့ ကြာပါပြီ။ မဗေဒါ သတိမထားမိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မမြူး...... ကြိုက်တယ်ဆိုရင် Cheers! Give me five!
အမသက်ဇင်ရေ..... ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းသွားရင် ဝမ်းသာပါတယ်... အမ....
ကိုဟတ်ကြီးရေ လာနားထောင်တယ်နော် ဂျ သိလား
ဒါနဲ့စကားမစပ် အသက်မမေးနဲ့ဆိုလို့ ဒီက သိပါတယ် မပြောခင်ကတည်းက profile မှာကြည့်ပြီးသား ၃၅ မလား ညီမ အမတဝမ်းကွဲထက် ကြီးတယ် ဗျိုးးး (အသက်ကိုပြောပါတယ် )
ခစ်ခစ် လာလည်တာ ကျေးဇူးနော် ဘိုင်
Yeah.. Tell me why, why why....
AP ရေ ကျွန်တော်ကတော့ ငါစွဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ အတ္တကြီးတာကြောင့် လို့ ထင်တာပါပဲ။
ှုငှက်လေးကတော့ ဖော်ကောင်လုပ်ပြီ။ :D